ပန်းပွင့်ကို Power Maxi Dress - Buddhatrends
$64.60 $76.00 သငျသညျ (15% Save$11.40)
ရေတပ်အပြာရောင် / အသေးစား ရေတပ်အပြာရောင် / အလတ်စား အကြီးစားရေတပ်ပြာ / X-အကြီးစားရေတပ်ပြာ / ရေတပ်အပြာရောင် / 2XL ရေတပ်အပြာရောင် / 3XL ရေတပ်အပြာရောင် / 4XL ရေတပ်အပြာရောင် / 5XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / အသေးစား စပျစ်ရည်ကိုနီ / အလတ်စား အကြီးစား / အနီရောင်စပျစ်ရည်ကို စပျစ်ရည်ကိုနီ / X-အကြီးစား စပျစ်ရည်ကိုနီ / 2XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / 3XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / 4XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / 5XL အနီရောင် / အသေးစား အနီရောင် / အလတ်စား အကြီးစား / အနီ အနီရောင် / X-အကြီးစား အနီရောင် / 2XL အနီရောင် / 3XL အနီရောင် / 4XL အနီရောင် / 5XL
pattern အမျိုးအစား: ပန်းပုံနှိပ်ပါ
M က ** ဟာအေ
တစ်ဦးက ** ဟာဂျီ
J ကို ***** တစ် P.
စုံလင်သော! အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, ကြီးသောရောင်းချသူ
M က **** တစ်တီ
T က ** တစ် O.
စူပါ! စုံလင်သော! အလွန်သာယာသောစားဆင်ယင်!
J ကို *** အီးအက်ဖ်
တစ်ဦးက ** ဟာအက်ဖ်
အီး *** တစ်ဦး V.
S က ****** တစ် K.
အရမ်းကြီးမားတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်။ အတိအကျ widish ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီကိုကြိုက်များနှင့်ကအခမဲ့လုပ်စေချင်တယ်။ ငါ့ကို သာ. အရေးကြီးသောအရှည်နှင့်လက်အရှည်။ 172-မှဖမျက်သို့မှီ။ ပစ္စည်းကိုခန္ဓာကိုယ်မှအလွန်သာယာသော, က c / ခ, ပျော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ချုပ်ရိုးထဲမှာနက်ရှိုင်းသောအိတ်ကပ်။ ပြောင်လက်တောက်ပသော, နွေးထွေးသောအရောင်များ။ အဆိုပါဖြတ်မျဉ်းကြောင်းများနှင့်မဓာတ်ပုံပေါ်တွင်ထင်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်, sak ။ ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါဝယ်ယူနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အက်စ်ဏ: D ***
S က *** တစ်ဦး K.
Awesome ကိုစားဆင်ယင်! ပုံထဲကထက်ကမ်းပါးမတ်!
K သည် ****** တစ် K.
Delivery အစာရှောင်ခြင်း, မော်စကိုကှကျ 12 နေ့ရက်ကာလအဘို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အေးမြဝတ်စားဆင်ယင်! တစ်စက္ကန့်အချိန်အမိန့်, tk မိတျဆှေကိုမြင်လျှင်နှင့်သူမ၏တူအမိန့်ကိုမေးမြန်း!
အီး *** တစ်အက်စ်
အလွန်လှပအဆင်ပြေစားဆင်ယင်။ ငါကအခြားအရောင်များကိုပိုမိုအမိန့်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရောင်းချသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်
: D *** တစ်အက်စ်
ဖော်ပြချက်ပြောပါတယ်သကဲ့သို့လှပသော! ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်! ဒါဟာအပေါ်တစ်ဦးခါးပတ်နှင့်အတူပိုကောင်းလှပါတယ်။
ငါ boho စတိုင်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်နှင့်ဤစားဆင်ယင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သင်ကလျော့ရဲရဲဖြစ်ချင်လျှင်, ငါအရွယ်အစားပိုကြီးတဲ့အပေါ်ယူအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဂရိတ်စားဆင်ယင်, deffinitely ပိုပြီးမဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါးပတ်နှင့်ဂျင်းအင်္ကျီနှင့်အတူအကောင်းလှပါတယ်။ Classy စားဆင်ယင်ခြင်း, ထည်တွန့်ပါးလွှာသောပိတ်ချောပေမယ့်ဒါဟာအကြီးအကြည့် !!! အဆိုပါအိတ်ကပ်ချုပ်ရိုး၏ဘက်မှာရှိပါတယ်။ သငျသညျရောင်းချသူ5ကြယ်ပွကျေးဇူးတင် !!!!!)))))
Grey က Sleeveless Maxi Dress ၏2Shades $67.15 $79.00